Inkcazo:Ukuhamba ngeMoto ye-Android ye-Ibiza ngo-2018,Ukuhamba ngeenqwelo zeIbiza ngo-2018,I-Ibiza 2018 Ukuhamba ngeMoto kwe-Android
Home > Imveliso > Isihlalo se-Dvd seMoto ye-Android > Ukuhamba ngeMoto ye-PX5 ye-Android ye-Ibiza ngo-2018
Umzekelo No.: KD-9823
Enkosi ye-Android 8.0 entsha Oreo inceda ukunciphisa umsebenzi wasemva kwii -app zokusebenza osisebenzisa kancinci ukunika isantya sokuqalisa. Khusela yonke into entsha kuGoogle Play ukukhusela, ukunceda ukuba uqiniseke ukuba akukho nto kwi-app yakho ekongwayo, kunye nokugcina isixhobo sakho sikhuselekile.
Umgangatho ophezulu we-Octa-Core 1.6Ghz CPU, 4G RAM kunye nokumangalisayo okwakhiwe kwi-32GB Flash;
I-Android 8.0 OS eneCapacitive touchscreen 1024 * 600 1080P HD Isisombululo seVidiyo;
Isibonisi se-Mirroring Airplay kunye noMsebenzi weMiracast-yabelana ngevidiyo okanye iingoma ukusuka kwifowuni yakho kunye nefowuni eyi-Android ukuya kwi-Android Car Navigation ye-Ibiza 2018;
Ukuhamba ngeMoto ye-Android ye-Ibiza 2018 eyakhelwe-ngaphakathi kwisantya esikhulu se-WIFI kunye neGoogle Playstore yokukhuphela usetyenziso ezahlukeneyo kwimarike ye-Android.
Umsakazo we-FM / AM werediyo yeRDS (Inkqubo yeDatha yeRadio, ehambisa igama lesitishi);
Ukuhamba ngeMoto ye-Android ye-Ibiza 2018 eyakhelwe kwinkqubo yeGPS enomsebenzi we-dual zone: (Ukumamela umculo ngelixa ukwindlela yokuhamba);
Inkqubo ye-Elektroniki yokulwa nokothuka kunye neVibration;
CD / DVD-Player Media IFomathi: CD, CD-R / RW, MP3, MP4, WMA, DVD, DVD ± R / RW, DVD-MP3, AVI, Xvid und JPEG ngaphezulu;
I-USB / SD / SDHC Slot-Ngomculo, imifanekiso kunye neevidiyo, dlala umculo kunye neevidiyo ngqo;
I-A2DP -Ukusakaza umculo ngokuthe ngqo kwiBluetooth;
I-Bluetooth yeefowuni ezingenazandla, Ungqamaniso lwefowuni yefowuni yefowuni;
Imemori yokuZenzekelayo-Zonke iiseto kunye nendawo zigcinwa ngokuzenzekelayo;
Umsebenzi weNdawo yokubuyela umva-Dlala ividiyo kwi-Monitor ngasemva ngokuhambisa ngomkhombandlela ophambili;
Umsebenzi woSuku kunye nobusuku - setha ukukhanya ngokuzenzekelayo
Ikhamera engemva IN-ngokutshintsha kokuzenzekelayo Umsebenzi xa ubambisene iGear;
Ukucwangciswa kwesiko kunye nokuseta kwakhona ii-EQ zesiseko (iPop, iklasikhi, iLitye, iJazz, iBass yomsebenzisi / iTreble / Balance Balance;
Iqhosha lokuKhanyisa 100% umdlalo kunye nokhanyiso lwemoto yasekuqaleni;
Isiphumo se-Subwoofer, 4 x Iziphumo zoMsindo, 2 x Ividiyo OUT, 1 x I-AUX Ividiyo.
I-1x Multimedia + Navigation System
Intambo yamandla ye-1x + Canbus Decoder.
I-1 x Iicwecwe zeVidiyo / zeVidiyo
I-1x GPS Antena 300cm
I-1x Radio Antenna Adapter
I-1 x I-Microphone yangaphandle
Ukuhamba ngeMoto ye-Android ye-Ibiza ngo-2018 Ukuhamba ngeenqwelo zeIbiza ngo-2018 I-Ibiza 2018 Ukuhamba ngeMoto kwe-Android Ukuhamba ngeMoto ye-Android ye-I20 ngo-2018 Ukuhamba ngeMoto ye-Android ye-I20 Ukuhamba ngeMoto ye-Android ye-E90 Ukuhamba ngeMoto ye-Android ye-Elantra Ukuhamba ngemoto ye-DSP ye-I20 ngo-2018